Qarax Ka Dhacay Duleedka Muqdisho. – Calamada.com
Qarax Ka Dhacay Duleedka Muqdisho.
Inta la xaqiijiyey qaraxan waxaa ku dhintay ugu yaraan saddex askari oo katirsan maleeshiyaatka dowladda Federaalka Soomaaliya waxaana ku dhaawacmay illaa Shan askari oo kale.
Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa dhowr jeer wadada u dhexeysa Muqdisho iyo Afgooye ka fulisay qaraxyo lagu laayay maleeshiyaat Soomaali ah oo ka yimid furimaha dagaalka ee Sh/hoose kuna sii jeeday magaalada Muqdisho iyo ciidamada shisheeyaha AMISOM.
Previous: Weerar Culus Oo Ka Dhacay Gobalka Gaarisa.